गरे के हुदैन रहेछ? श्रीमानकाे ५० लाख लिएर कुमारसँग भागेकि नकुलकि श्रीमति भारतकाे केरलामा यसरी बाटैमा भेटिएपछि… (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > गरे के हुदैन रहेछ? श्रीमानकाे ५० लाख लिएर कुमारसँग भागेकि नकुलकि श्रीमति भारतकाे केरलामा यसरी बाटैमा भेटिएपछि… (भिडियो हेर्नुस्)
admin February 10, 2020 भिडियो, समाज	0
केही दिन देखि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको नकुल अधिकारी र अनुपाको घटनामा नयाँ ट्वीष्ट आएको छ । अनुपा भारतको केरलामा फेला परेपछि घटनाले अर्को रुप लिएको हो । झण्डै ५० लाख बढीको सम्पत्ती लिएर दुई बच्चा सहित श्रीमती सम्पर्क विहिन भएपछि तनहुँका नकुल अधिकारी दुई महिना यता खोजीमा थिए । श्रीमती अनुपा अधिकारी सम्पर्क विहिन भएकी हुन् । नकुल दुवईमा रहेर वैदेशिक रोजगारीमा थिए ।
दुई महिना भन्दा लामो समय देखि उनको श्रीमती छोराछोरी सहित सम्पर्क विहिन भएपछि उनी पनि रुँदै मिडियामा आएका छन् । हराएकी श्रीमती खोज्न नकुल तीन दिन तिन रातको रेल र बसको यात्रा गरेर भारतको केरला पुगेका थिए । केरलाको पानामार भन्ने स्थानमा रहेकी अनुपालाई लिन नकुल अधिकारी भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पुगेका थिए ।